PCB ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့ - SHENZHEN KAISHENG PCB CO ။ , LTD
PCB ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း - PCBFuture
Keyword: PCB တပ်ဆင်ခြင်း၊ PCB ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း၊ PCBA စွမ်းရည်
PCBFuture တွင်ခိုင်မာသည့်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ရှိပြီး TS16949၊ UL, RoHS, CE, ISO စသည်တို့ဖြစ်သည်။ PCB အတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင် Flying Probe Test နှင့် E-Testing ရှိသည်။ PCBA အတွက် IQC, AOI, Function Test, QA ရှိသည်။ ဤရွေ့ကား PCB စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အခြေခံပေမယ့်အလွန်အရေးကြီးသောအချက်များဖြစ်ကြသည်။
လူကြိုက်အများဆုံးအဖြစ် အီလက်ထရောနစ်ပရိသကုမ္ပဏီများသည် တရုတ်နိုင်ငံတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်စျေးကွက်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန် full-spec အီလက်ထရွန်နစ်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်များကို ၁၀ နှစ်ကြာအောင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း၊ အရည်အသွေး၊ ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများမှဖောက်သည်များရှိသည်။ PCB အပြင်အဆင်မှ PCB ရှေ့ပြေးပုံစံ၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ထို့နောက် PCB တပ်ဆင်ခြင်း၊ အီလက်ထရွန်နစ်သေတ္တာတပ်ဆင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအထိကျွန်ုပ်တို့၏ပုံနှိပ်တိုက်ဘုတ်များကိုစက်ရုပ်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ မော်တော်ယာဉ်၊ ဆက်သွယ်ရေး၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်သည်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် PCB၊ ထုံးစံ PCB၊ ရှေ့ပြေးပုံစံ PCB၊ turnkey PCB assemble၊
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ pcb ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်တပ်ဆင်ရွေးချယ်ပါ:
၁။ အထူးမြင့်မားသောတိကျမှုနှင့်တိကျမှု - ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့ပြေးပုံစံများသည်တိကျမှန်ကန်မှု ရှိ၍ ဖောက်သည်များ၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည်။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအလေးအနက်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
2. အလှည့်အပြောင်းပြောင်းလဲခြင်း - သုံးစွဲသူ၏အချိန်တန်ဖိုးကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ရှေ့ပြေးပုံစံကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအမြန်နှုန်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ရန်ကြိုးစားသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လျင်မြန်သောရှေ့ပြေးပုံစံ PCB တပ်ဆင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုသည်သင်၏စောင့်ဆိုင်းရသောအချိန်ကိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မှမိနစ်အနည်းငယ်အထိတိုစေနိုင်သည်။
၃။ အလွန်နိမ့်ကျသောစျေးနှုန်းများ - ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းများကိုအနိမ့်ဆုံးနှင့်တတ်နိုင်စေရန်သင်၌ပြည့်စုံသောချဉ်းကပ်မှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏စီမံကိန်းကိုသင့်တော်သောဘတ်ဂျက်ဖြင့်ပြီးအောင်ဆောင်ရွက်မည်။
4. အမှားပြင်ဆင်ခြင်း - ကျွန်ုပ်တို့၏ PCB ရှေ့ပြေးပုံစံသည်ချို့ယွင်းချက်များကိုရှာဖွေရန်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ ဤချို့ယွင်းချက်များကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဖယ်ရှားခြင်းသည်သင့်အားအချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်များစွာသက်သာစေသည်
၅ ။လျင်မြန်စွာအလှည့် PCB ပရိသ- သင် PCB ရှေ့ပြေးပုံစံကိုတောင်းခံနိုင်သည်။ သင်သာ PCB ဒီဇိုင်းကိုတင်ပြခြင်းနှင့်ရလဒ်များကိုလက်ခံရရှိရန်လိုအပ်သည်။
အပြည့်အ ၀ ထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုမီစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း - ရှေ့ပြေးပုံစံပြားများကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်၎င်းတို့အနေဖြင့်လိုအပ်သလိုအလုပ်လုပ်ခြင်းရှိမရှိကိုကျွန်ုပ်တို့ခွင့်ပြုသည်။
မျက်နှာပြင် mount (SMT)
SMT & THT စပ်
PCBA အတွက်လိုအပ်သောအချက်အလက်များ -
• ပုံနှိပ်တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့ (PCB)
• resistors အဖြစ်လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများကို။
• ထိုကဲ့သို့သောဝါယာကြိုး, preforms, ဘား, flux နှင့်ငါးပိအဖြစ် Soldering ပစ္စည်းများ။
• လှိုင်းဂဟေဆက်စက်များ၊ မျက်နှာပြင်လှည်း၊ SMT-Stencil၊
PCBFuture စတင်တည်ထောင်ချိန် မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပရှိကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ပထမ ဦး ဆုံးအရည်အသွေး၏စိတ်ကူးနှင့်ဖောက်သည်များသည်လူကြိုက်များမှုမြင့်မားသောဘုရားဖြစ်သည်။ အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းများ၊ အရည်အသွေးကောင်းသည့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုတို့ဖြင့်နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ ကျော်မှကုမ္ပဏီများ၏ယုံကြည်မှုနှင့်ပံ့ပိုးမှုရရှိခဲ့သည်။